Talyaaniga oo dhan hadda waa Aag Casaan ah oo la ilaaliyo oo ah COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Talyaaniga oo dhan hadda waa Aag Casaan ah oo la ilaaliyo oo ah COVID-19
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Italy War Deg Deg Ah • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Talyaaniga oo dhan ayaa hadda ah aag cas oo la ilaaliyo
Wareegto cusub ayuu ku dhawaaqay Madaxweynaha Talyaaniga Conte shirkiisa jaraa'id maanta, Isniinta, Maarso 9, 9ka fiidnimo isagoo adeegsanaya shabakad mideysan oo TV ah. Wareegtadu waxay dhaqan gelaysaa berri oo Talaado ah, Maarso 10. Ma jiri doono aag 1 iyo aag 2 sababtoo ah COVID-19, laakiin hadda kaliya hal aag: Talyaanigu ilaaliyo, sidoo kale loogu yeero Aagga Cas.
Dardaarannada ay dowladdu siiso muwaaddiniinta reer Talyaani waa inay guriga iska joogaan inta ugu badan ee suurtogalka ah oo ay baxaan oo keliya haddii ay daruuri adag tahay. Marka la eego, ololaha hal-ku-dhigga ah "Gurigeyga ayaan joogayaa" waxaa si maalinle ah u sii daaya heesta Talyaani iyo muujinta sanamyada TV-ga iyo sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka ee ku saabsan tallaabooyinka nadaafadda ee la ilaalinayo.
Wareegtada uqalineysa Talyaaniga guud ahaan aagga "aagga cas" ee la ilaaliyo waxaa ka horreeyay wareegtada Maarso 7 markay tahay 10 pm oo lagu dhawaaqay:
“Si looga hortago loona xakameeyo faafitaanka COVID-19 ee gobolka Lombardy iyo gobolada Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro iyo Urbino, Venice, Padua, Treviso, Asti, iyo Alessandria waa waxay qaateen tallaabooyinka soo socda: gabi ahaanba iska ilaali dhaqdhaqaaq kasta oo soo gala ama ka baxa dhulalka lagu xusay qodobkan, iyo sidoo kale isla dhulalkii lagu sheegay qodobkan, marka laga reebo dhaqdhaqaaqyada ay sababaan baahiyaha shaqo ee aan dan ka lahayn ama xaaladaha degdegga ah.
Wareegtada Lombardy waxay fursad u siisay ifafaale argagax weyn. Kumanaan kun oo qof oo aan daganayn magaalada Milano ayaa ku soo yaacay saldhiga tareenka waxayna ku soo xoomeen tareenada xitaa iyagoon boos ka heysan, taasoo dhibaato weyn ku abuurtay shaqaalaha tareenka.
Marka lagu daro halista ah in la keeno infakshan kasta oo fayras ah meelaha ay degan yihiin muwaadiniinta, waqtiga “baxsadka”, digreetada wali lama ansixin. Habdhaqanka noocan oo kale ah wuxuu sidoo kale saameyn taban ku yeelan karaa gobolladii ay dadku magan galeen, sidaas darteed qaar iyaga ka mid ah ayaa lagu karantiimeeyay kuwii ka yimid meelahaas ayaa loo arkaa inay qatar ku jiraan.
Khaladka aasaasiga ah ee xaaladdan oo dhan wuxuu ahaa in la soo saaro qabyo qoraalka wareegtada ka hor inta aan xitaa la ansixin. Golaha Daryeelka, Giulio Gallera, wuxuu yiri talaabooyin sida Wuhan oo kale ah ayaa la qaadi doonaa hadii aysan muwaadiniintu caawinin dowlada.
16 milyan oo ka mid ah dadka ku nool Lombardy, waxaa jira 6,587 infekshan iyo 366 dhimasho illaa maanta. Rafcaanka: "Guriga joog, waa hubka kaliya ee aan haysano." Xaaladda deg degga ah ee 'COVID-19 Coronavirus' ee ku taal Lombardy weli wey is beddeleysaa. Waqtigaan la joogo, "nidaamkeenna daryeel caafimaad waa uu taaganyahay," ayuu yiri Councillor Gallera.
Sariiraha daryeelka degdegga ah ee COVID-19 ayaa kor u kacay illaa 497, Lombardy wuxuu bukaanleyda ugu diri karaa gobollada kale iyada oo loo marayo shabakadda iskutallaabta. Si kastaba ha noqotee, loollanka waqtiga ayaa leh xaddidan oo ay ku caddeeyeen Lombard intensivists warqaddooda ay u direen Dowladda.
Haddii cudurka uusan hoos u dhicin, ka hadal “18,000 oo isbitaal la dhigay” illaa 26-ka Maarso, oo “inta u dhexeysa 2,700 iyo 3,200 [ay ku jiri doonaan] daryeel adag.” Xildhibaan Gallera wuxuu yiri: “Magaalada Lombardy, wali wey ku guuleysanayaan inay ka bixiyaan jawaab la xiriirta soo gelitaanka ICU, laakiin maalmihii ugu dambeeyay, waxay ku kordhiyeen 700%.
“Waxaan ka furaneynaa goobaha daryeelka degdegga ah meel walba; shaqo weyn ayaan qabaneynaa, laakiin waa dagaal isdaba joog ah, ma garanayo inta aan qaban karno. ”
Jooji manfacyada aan degdegga ahayn
Si dib loogu soo celiyo shaqaalaha loo qoondeeyay xaaladaha degdega ah, joojinta adeegyada aan degdegga ahayn iyo dib u dhigista ee qalliinnada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee isbitaallada ayaa maanta kiciyay, taas oo guud ahaan loogu talagalay xirfadleyda lacagta la siiyay.
Qalalaasaha ka jira xarumaha xabsiga
Waxaa jira rabshado ka socda gudaha 22 xabsi oo Talyaani ah oo ay sababeen maxaabiistu kadib kiis kiis oo faafa iyo mudaharaadyo xubnaha qoyska ka baxsan oo looga mamnuucayo kulamada maxaabiista. Rabshad ka dhacday xabsiga San Vittore ee magaalada Milano ayaa sababay dab iyo 6 dhimasho. Maxaabiista ayaa codsanaya cafis. Xabsiyada koonfureed, 20 ayaa baxsaday ka dibna waa la soo kabsaday.
Warbixinta Coronavirus war
Iskuulada iyo jaamacadaha waxay xirnaayeen ilaa 3-dii Abriil Waqooyiga Talyaaniga. Dhacdooyinka nuucyadiisa kala duwan iyo sidoo kale cayaaraha kubada cagta, adeegyada diinta, aroosyada, shirarka, jimicsiyada, barkadaha dabaasha, iyo inbadan.
Burburkii dalxiis ayaa gebi ahaanba ka dhacaya dalka. In Venice, hudheelada oo dhan waa la xiray - wadar ahaan 400 - sababtoo ah boos celin la'aan ilaa Abriil 3. Xaaladaha la midka ah ayaa ka dhacaya inta kale ee Talyaaniga iyadoo la saadaalinayo waxyeelo dhaqaale oo balaayiin ah oo heer qaran ah. Qaybta dhaqaalaha ayaa ku jirta khatar culus.
Midowga Yurub wuxuu ansixiyay dabacsanaanta iyo gargaarka gobolka ee sheegaya COVID19 qof walba wuu saameeyaa. Telefishinka Raadiyaha Talyaaniga (RAI) ayaa u soo gurmaday ardayda sababo la xiriira xirnaanshaha iskuulada barnaamij “RAI loogu talagalay iskuulka” oo ay ku jiraan 8-saacadood barnaamijyada waxbaridda masaafada maalinlaha ah.
Infekshanku wuxuu saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka socota isbitaalka carruurta ee Bambin-Gesù ee ku yaal Rome Warka kaliya ee wanaagsan ayaa ah in laga bilaabo 10-ka Maarso, baaritaanada aqoonsiga ee dadka safarka ah lagu qaadi doono waddooyinka, jidadka waaweyn, garoomada diyaaradaha, saldhigyada tareenada, garoomada diyaaradaha, iyo magaalooyinka. Shakhsiyaadka waxay u baahan yihiin inay muujiyaan is-caddeyn iyagoo ku dhiirrigelinaya guuritaanka. Kuwa heysta shahaadooyinka beenta ah waxay mari doonaan ganaaxyo lagu soo saaray wareegtada.
War wanaagsan goor dhow Hadal-haynta ugu dambeysa waxay muujineysaa in Israa'iil ay soo warisay tallaalka COVID-19 ee coronavirus ayaa dhawaan la heli karaa. Dalka Mareykanka, waqtiga lagu qiyaasayo waa hal sano kahor tallaal qof walba loo heli karo.